Wararka Maanta: Talaado, Jun 12, 2012-Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Ahlusuna Waljameeca oo isaga baxay deegaanka Wabxo iyo Al-Shabaab oo la wareegtay
Deegaankan ayaa wuxuu noqonayaa goobtii labaad oo ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Ahlusunna isaga baxeen toddobaadkan kana tirsan gobolka Galguduud, iyadoo aan la ogeyn sababta keentay inay deegaanka Wabxo isaga baxaan.
"Saakay waaberigii hore ayay ciidamada Itoobiya oo wata gaadiid ay ka mid yihiin taangiyo isaga baxeen deegaankan Wabxo, waxayna aadeen dhinaca degmada Guriceel," ayuu yiri goobjooge ku sugan Wabxo oo 40-km koonfur kaga beegan degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud.
Goobjoogaha ayaa intaas ku daray in xoogag taabacsan Al-shabaab oo wata gaadiid dagaal ay gudaha u galeen deegaankaas, ayna hadda gacanta ku hayaan, iyadoo ay dadku aad ula yaaban yihiin isbedelka dhacay.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Ahlusunna ayaa waxay Axaddii lasoo dhaafay isaga soo baxeen degmada Ceelbuur oo 100-km u dhinaca bari kaga beegan xarunta gobolka Galguduud ee Dhuusomareeb, iyadoo aan la ogeyn sababta ay uga soo baxeen.
Degmada Ceelbuur ayaa waxaa hadda gacanta ku haysa xoogagga Al-shabaab oo laba bilood ka hor isaga baxay, waxaana saraakiisha kooxdan ay ku tilmaameen dib u qabsashada degmada Ceelbuur inay ku timid dagaallo ay ku qaadeen ciidamadii horay ugu sugnaa.
Saraakiil ka tirsan Ahlusunna ayaa iyaguna sheegay in xeelad dagaal ay uga baxeen degmada Ceelbuur ayna dib ugu laaban doonaan, halka mas'uulka ugu sarreeya ururkan uu sheegay inaysan dib ugu laabanayn degmada Ceelbuur.